Samy manana ny heviny momba ny zavatra tsara ny tsirairay raha ny resaka fitongilanana - MediaLight Bias Lighting
Samy manana ny heviny momba ny zavatra tsara ny rehetra raha ny resaka jiro bias no resahina.
Ny MediaLight dia manana fenitra.
Izahay dia manangana ny MediaLight® miaraka amin'ireo singa manana kalitao faran'izay avo lenta ary ireo matihanina Hollywood sy ireo mpankafy sinema an-trano dia matoky ny The MediaLight ho an'ny maripana miloko mifanaraka tsara (6500K, ary indrindra ny CIE standard illuminant D65 "video white") ary ny index index of high color (CRI) ilaina ho an'ny fijerena fitsikerana ny loko. Raha mila manolo na manamboatra ny MediaLight ianao mandritra ny 5 taona fiantohana dia voasarona ny singa rehetra ao amin'ny rafitry ny jiro MediaLight - na dia ho an'ireo zavatra toy ny fahasimbana tsy nahy na fangalarana aza.
Ny fiantohana anay dia feno kokoa noho ny fiantohana feno azo antoka indrindra mety ho hitanao amin'ny vokatra hafa. Ahoana no anaovantsika izany? Izahay dia manamboatra ny vokatray haharitra ary mino izahay fa tokony hahazo serivisy azo ianteherana 5 taona farafahakeliny avy amin'ny MediaLight anao. Takianay ny hijoroan'ireo mpamatsy antsika ao aorinan'izy ireo koa. Raha soloinay ny ampahany dia averin'izy ireo izahay.
Sary nahazoana alalana tamin'i David Abrams an'ny Avical.com
"Ny fenitry ny indostria dia mitaky hazavana mitongilana ao ambadiky ny fampirantiana, ary miaraka amin'ny fahaizan'ny luminance avo lenta HDR, dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny miady amin'ny harerahana maso. Ny rafitra MediaLight dia manome vahaolana tena tsara ho an'ny mpijery mahay, mampihena ny havizanan'ny maso, manatsara ny fifanoherana hita, ary manatsara ny traikefan'ny mpijery. Tsy vitan'ny hoe mamporisika ny MediaLight ho an'ny mpanjifantsika izahay, fa io no ampiasaiko manokana ao an-tranoko. "
Ny MediaLight dia fomba mora vidy mampihomehy mba ahazoanao tombony betsaka amin'ny fampirantianao. Tsy ireo tady LED mora entina hitanao amin'ny tranokala hafa, na ireo jiro miova loko izay tsy mahay mamorona tena fotsy video.
Izahay dia manao vokatra jiro mitanila amin'ny lafiny matihanina ary manome lanja tsara lavitra noho ny volanao.
Isika dia mamaritra ny ColorGrade™ Chip SMD (LED mount fitaovana any an-toerana) mba hanaovana fitsapana mafy alohan'ny hametahana azy ireo amin'ny PCB varahina ho an'ny fitarihana hafanana mahery vaika, ary ampidirinay ao anaty kit izay rehetra ilainao ao anaty kitapo mba hahazoana "vahaolana anaty boaty" marina.
Tsy ilaina ny fitaovana (ankoatry ny hety, raha manapaka ny tadiny amin'ny habe kely kokoa ianao) ary faly ianao mahita fa ny MediaLight dia kely noho ny vahaolana DIY raha manome ny CRI ambony kokoa, ny mari-pana amin'ny loko ary ny fizarana herinaratra spectral. (Nanomboka DIYers izahay, ka tsapanay ny fanaintainanao!).
Tsy toy ny tarika LED hafa, ny rafi-jiro fanavakavahana dia manolotra:
Suhu marim-potoana D65 / 6500K tena marina (CCT)
CRI avo indrindra (98-99 Ra ho an'ny MediaLight Mk2 sy MediaLight Pro)
Warranty voafetra 5 taona (raha tsy azo amboarina dia hosoloinay)
Ampidirina ao anaty boaty 50-stop / 2% -indry PWM dimmer
Ny fanaraha-maso lavitra infrared dia miasa miaraka amin'ireo faritra lavitra eran'izao tontolo izao sy ireo hub misy ny IR (Eclipse dia misy dimmer amin'ny birao fa tsy lavitra)
LED lehibe kokoa sy mazava kokoa ary 50% mihoatra ny metatra noho ny ankamaroan'ny tsipika
Copper PCB ho an'ny fanaparitahana hafanana avo lenta sy fiainana lava kokoa
VHB mahery vaika amin'ny alàlan'ny fametahana adhesive 3M
Tsy misy fanontaniana apetraka amin'ny famerenana sy fandoavam-bola 45 andro karama na fifanakalozana (ho an'ny baiko USA ao amin'ny tranonkalanay USA).
Voamarina avy amin'ny Fondation Science Science
Nofehezin'ny Spacey Spear
Notohanan'i David Abrams of Avical
Raha mumbo-jumbo aminao ity fampahalalana ity, ny zavatra nesorina dia ny The MediaLight no jiro voafidy amin'ny studio ambony any Hollywood, mpamokatra horonantsary, mpankafy teatra an-trano, mpilalao ary mpankafy fanatanjahantena.
Ny fanamafisana lehibe indrindra dia ny vavan'ny mpanjifanay izay nanatsara ny vokatray tamin'ny alàlan'ny fanoloran-kevitr'izy ireo ny fisehoan-javatra vaovao nandritra ny taona maro. Aza hadino ny mamaky ny hevitra ary jereo ireo forum an-tserasera.
Ampidirinay ao anaty boaty izay rehetra ilainao amin'ny fametrahana kalitao matihanina, ary raha misy zavatra tsy nantenainay dia ampahafantaro anay. Hanao ny tsara indrindra vitantsika izahay hamahana ny toe-javatra tsy manam-paharoa amin'ny alàlan'ny mailaka, chat na antso an-tsary.
Ny tsipika vokatra vokatra MediaLight iray manontolo, manomboka amin'ny $ 32 MediaLight Mk2 Eclipse ka hatrany amin'ireo rafitray lehibe kokoa, dia nohamarinin'ny The Fondation Science Science (ISF) ary atokisan'ny mpizahatany sinema an-trano ary koa matihanina amin'ny sarimihetsika sy fandaharana. Ny antony tokana hisafidianana maodely iray amin'ny iray hafa dia ny fampifanarahana ny fahitalavitrao sy ny fipetrahanao.